Fifandraisana sy fahitana | Martech Zone
Mampiasa GotoMeeting izahay isan'andro isaky ny miasa mba hiresahana amin'ireo mpanjifantsika. Tena tsara tokoa raha mahita ny iray amin'ireo mpanjifanay sy mpanohana anay, Mindjet, milalao horonantsary GotoMeeting! Miresaka ny fampifanarahana ilay video. Na mamolavola a sarintany na ny fandinihana ny drafitry ny tetikasa… ny fahitana no tena ilaina. Ny sarintanin'ny saina dia maka sary an-tsaina ny hevitra, ny fizotrany ary ny fifandraisana mba hahamora azy ireo.
Gotomeeting, mazava ho azy, dia mitovy amin'ny fahaizany miresaka ankehitriny amin'ny feo, amin'ny maso (ao anatin'izany ny horonantsary webcam), ary amin'ny alàlan'ny fampiharana mitondra olona avy amin'ny lafivalon'ny planeta na manerana ny orinasa ao amin'ilay efitrano iray ihany. Na dia doka ara-barotra aza izany, ilay hafatra izay namako akaiky sy mpiara-miasa amiko Jascha Kaykas-Wolff mitondra, dia tena ilaina.
Raha te handre bebe kokoa amin'i Jascha ianao dia aza hadino ny mihaino ny dinidinika ataontsika:
Henoy ny dinidinika ataontsika amin'i Jascha!
Tags: gotomeetingJascha Kaykas-WolffMindjettsaina
Fitaovana fihodinana varotra orinasa kely
27 Aogositra 2012 amin'ny 12:28 PM
Misaotra betsaka, Doug, tamin'ny fizarana ny lahatsarinay #MeetingIsBelieving amin'i Jascha! Mbola betsaka ny zavatra ho avy manasongadina an'i Jascha sy MindJet 🙂 Manantena ianao fa tsara!
27 Aogositra 2012 amin'ny 3:58 PM
Miloka ianao, @justinlevy: disqus! Vokatra tsara ary vita tsara ny horonantsary. Ary nampahatsiahy ahy izany fa mila mikorontana amin'ny GotoMeeting amin'ny iPad-ko aho!